ရေချိုးတဲ့ ဗွီယိုဖိုင်ကိုတင်ပီး ဈေးဗန်းခင်းတဲ့ ရုပ်သံ လူကြည့်များနေ -
အွန်လိုင်းမှာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကြား ရေပန်းစားလာတာကတော့ ဈေးဗန်းခင်းတာပါ။ ဈေးဗန်းခင်းတိုင်းလည်း Rs ချိတ်ခွင့် ရတာမဟုတ်၊ အခင်းမတတ်ရင်လည်း သောက်ရှက် ကွဲတတ်ပါတယ်။
ပါးလေးဖောင်း လက်နှစ်ချောင်းထောင်တဲ့ ခေတ်ကလည်း ကုန်ခဲ့ပါပီ။ အခုက Tik Tok တော့မှာ ဖင်ကောက် ရင်ကော့ရာကတစ်ဆင့် ဖင်ဖော် ရင်ဖော်ပီး ခင်းနိုင်မှ တော်ကာကြတာကလား။
ခက်တာက မြန်မာဆန်ဆန် နန်းဆန်ဆန်လေး တင်လိုက်ပြန်တော့ Likeက ဆယ်ယောက်တောင် ပြည့်တာမဟုတ်။ တင်ရတာ ရှက်တောင် ရှက်စရာ။
ဟိုမှာ ရုပ်က သခေါ၊ ပြောင်းဖူးမွှေးရောင် အမွှေးနဲ့ ကမတွေများ ပေါင်တစ်ဝက်လောက်ဖော် လည်လေးဟိုက်ပီး က ပြလိုက်တာ အယ့်လယ်…. အောင်ခြင်း အပါးတစ်ရာ ဆင့်လို့ ပလူးကြ ပရူးကြတာ ကလား။
ပုပ္ပါးမယ်တော်ပွဲမှာ အဖီဆွဲပီး အိုးတိုက် ဖွဲပြာရောင်းတဲ့ ကလေးအမေတေကလည်း ဆံပင်ဖားလျှားချလို့ ကြာကြည့် ကြည့်ပီး မမရင်ခွင်ထဲ လာတဲ့….။ အိုကေတာပဲ ….
ကျားတွေပေါတဲ့ အွန်လိုင်း တောနက်ထဲမှာ နွားတေလည်း အုပ်လိုက်ကြီး ပေါမှပေါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ခင်းတာလည်းခင်းကြ ဒါပေမယ့် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်ခင်းကြပါ။
အခုလို ရေချိုးရင်း ခင်းတာက ခင်းတတ်ရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပေမယ့် အခင်း မတတ်ရင်တော့ နှာစေးတတ်ကြောင်းပါ…….
ရခြေိုးတဲ့ ဗှီယိုဖိုငျကိုတငျပီး ဈေးဗနျးခငျးတဲ့ ရုပျသံ လူကွညျ့မြားနေ
အှနျလိုငျးမှာ ဆယျကြျောသကျတှကွေား ရပေနျးစားလာတာကတော့ ဈေးဗနျးခငျးတာပါ။ ဈေးဗနျးခငျးတိုငျးလညျး Rs ခြိတျခှငျ့ ရတာမဟုတျ၊ အခငျးမတတျရငျလညျး သောကျရှကျ ကှဲတတျပါတယျ။
ပါးလေးဖောငျး လကျနှဈခြောငျးထောငျတဲ့ ခတျေကလညျး ကုနျခဲ့ပါပီ။ အခုက Tik Tok တော့မှာ ဖငျကောကျ ရငျကော့ရာကတဈဆငျ့ ဖငျဖျော ရငျဖျောပီး ခငျးနိုငျမှ တျောကာကွတာကလား။
ခကျတာက မွနျမာဆနျဆနျ နနျးဆနျဆနျလေး တငျလိုကျပွနျတော့ Likeက ဆယျယောကျတောငျ ပွညျ့တာမဟုတျ။ တငျရတာ ရှကျတောငျ ရှကျစရာ။
ဟိုမှာ ရုပျက သခေါ၊ ပွောငျးဖူးမှေးရောငျ အမှေးနဲ့ ကမတှမြေား ပေါငျတဈဝကျလောကျဖျော လညျလေးဟိုကျပီး က ပွလိုကျတာ အယျ့လယျ…. အောငျခွငျး အပါးတဈရာ ဆငျ့လို့ ပလူးကွ ပရူးကွတာ ကလား။
ပုပ်ပါးမယျတျောပှဲမှာ အဖီဆှဲပီး အိုးတိုကျ ဖှဲပွာရောငျးတဲ့ ကလေးအမတေကေလညျး ဆံပငျဖားလြှားခလြို့ ကွာကွညျ့ ကွညျ့ပီး မမရငျခှငျထဲ လာတဲ့….။ အိုကတောပဲ ….
ကြားတှပေေါတဲ့ အှနျလိုငျး တောနကျထဲမှာ နှားတလေညျး အုပျလိုကျကွီး ပေါမှပေါ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈပါ ခငျးတာလညျးခငျးကွ ဒါပမေယျ့ အခွအေနနေဲ့ အခြိနျအခါကို ကွညျ့ခငျးကွပါ။
အခုလို ရခြေိုးရငျး ခငျးတာက ခငျးတတျရငျ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျပမေယျ့ အခငျး မတတျရငျတော့ နှာစေးတတျကွောငျးပါ…….
မနက်ပိုင်းထက်စာရင် ညပိုင်းတွေမှာ လုပ်ရန် ပိုသင့်တော်သော အရာများ
မနက်ပိုင်းထက်စာရင် ညပိုင်းတွေမှာ လုပ်ရန် ပိုသင့်တော်သော အရာများ Scarlett O’Hara ဆိုတဲ့ ပညာရှင် ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာ အလွဲတွေကို ဒီလိုဘဲ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။ ဥပမာ မနက်ပိုင်းမှာ ရေချိုးတာထက် ညနေပိုင်းမှာ ချိုးတာ ပိုသင့်တော်ကြောင်းတွေပေါ့။ မနက်ပိုင်းမှာ အစားတွေ အများကြီးစားပြီး ညပိုင်းတွေမှာ မစားဘဲနေ တတ်ကြ ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ညဘက်တွေမှာ ဗိုက်ဆာလာပြီး အိပ်မပျော် တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်လာတတ် ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း နောက်တခုကတော့ လမ်းလျှောက် တာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး မနက်ပိုင်းထက် ညနေပိုင်;တွေမှာ လမ်းလျှောက် တာဟာ ပိုပြီး သင့်တော် ပါတယ်။ စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုလဲ လျော့ကျစေနိုင်သလို ညဘက် …
This Year : 317411
Total Users : 612544
Total views : 3006446